မန္တလေး – Ministry of Union Government Office
စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ရေတော်ကျေးရွာ အထကခွဲကျောင်း၌ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံသားများလက်ခံထားရှိမည့် community base facility quarantine center များအား မြို့နယ်covid-19 ကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
၂၉-၄-၂၀၂၀ရက်နေ့ ၀၈၃၀အချိန် စဉ့်ကူးမြို့နယ် ၊ရေတော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ရေတော်ကျေးရွာ အထကခွဲကျောင်း၌ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံသားများလက်ခံထားရှိမည့် community base facility quarantine center များအား မြို့နယ်covid-19 ကော်မတီမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ဧပြီ 28, 2020
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှသာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေး ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှသာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေး ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များမှ ငါန်းဇွန်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့သာစက်မှုဥယျာဥ်မြို့တော်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း အတွင်းရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများအား ၂၇-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စက်ရုံ(၆)ခု ၊ ၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စက်ရုံ(၂)ခု၊ စုစုပေါင်း(၈)ခု တို့အား စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မြင်းခြံမြို့နယ်တွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
(၂၈.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၁၃၄၅)နာရီအချိန်တွင် မြင်းခြံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးညီညီအောင် သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခန်းတွင် တိုင်း(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ၊ စည်ပင်၊ စက်မှုကြီးကြပ်၊ အလုပ်ဥပဒေ၊ အလုပ်ညွှန်တို့နှင့်အတူ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဧပြီ 27, 2020
ရမည်းသင်းမြို့နယ် C. B. F. Q. C (T. U Yemalthin) အ​ဆောင် ၁၊၂၊၃နှင့်အမျိုးသမီး၂ထပ်ဆောင်၊ ထမင်းစားဆောင်တို့၌ သန့်ရှင်း၊ ရေဖျန်း၊ ပိုးသတ်၊ ကြိုးတား၊ နံရံကပ် ပညာပေးစာစောင်ကပ်
၂၇-၄-၂၀၂၀ ရက်​နေ့၊ ၁၀၅၀နာရီ နံနက်၃နာရီ၄၅မိနစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လည်ဝင်​ရောက်လာသူ ၅၉​ယောက် စတင်Q ဝင်ခဲ့သည့် C. B. F. Q. C (T. U Yemalthin) Q များထား ရှိမည့် အ​ဆောင် ၁၊၂၊၃နှင့်အမျိုးသမီး၂ထပ်ဆောင်၊ ထမင်းစားဆောင်တို့အား ထွေအုပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်၊ စည်ပင်၊ ကျန်းမာရေး၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ကိုခင်မောင်ဇော် ပရဟိတအဖွဲ့ တို့ပူ​ပေါင်းကာ သန့်ရှင်း၊ ရေဖျန်း၊ ပိုးသတ်၊ ကြိုးတား၊ နံရံကပ် ပညာပေးစာစောင်ကပ် စသည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဧပြီ 26, 2020
တံတားဦးမြို့နယ် ယာယီပျံကျဈေးရွှေ့ပြောင်း ဆောင်ရွက်မှု
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၀၇:၃၀ အချိန်တွင် တံတားဦး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးလှဝင်းအောင်သည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဦးမင်းမင်းနီနှင့် ဦးဝဏ္ဏအောင်၊ မြို့နယ်စည်ပင်ကော်မတီဥက္ကဌဦးစန်းယုမောင် ၊ မြို့နယ်စည်ပင်အဖွဲ့တို့နှင့်အတူ ယာယီပျံကျဈေးရွှေ့ပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုအားကွင်းဆင်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရေး မြို့နယ်ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရေး အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်များတွင် စစ်​ဆေး
၂၅-၄-၂၀၂၀​ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့အတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရေး မြို့နယ်ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရေး အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်များတွင် စစ်​ဆေးခြင်း၊ မြို့တွင်း လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်းများဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Shown on Home Slider 10
မေ 2022 (5)